अन्तर्राष्ट्रिय खबर – Page4– shubhabihani
Home / अन्तर्राष्ट्रिय खबर (page 4)	अन्तर्राष्ट्रिय खबर	उत्तर कोरियाले दुनियाँलाई लुकाउन चाहेका तस्विर (फिचर)
748 Views एजेन्सी ।
विश्वमा भएका गतिविधीबारे जानकारी राख्ने सबैलाई थाहा छ उत्तर कोरियामा कस्तो देश हो भनेर । उत्तर कोरियाली जनता एक सनकी ब्यक्तिको तानाशाहीमा बाँचिरहेका छन् ।
उत्तर कोरियामा के भैरहेको छ, मानिस कसरी बाँचिरहेका छन् भन्ने विषयमा विरलै तथ्यहरु बाहिर आउने गरेका छन् । बाहिरी विश्वबाट त्यहाँको जानकारी लिनु सहज विषय होइन । उत्तर कोरियाले आफ्नो देशको वास्तविकता बाहिर नआओस् भनेर कसैलाई पनि देश छिर्न दिँदैन । नत र उत्तर कोरियालीहरु देश बाहिर जान पाउँछन् ।
उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन
यति हुँदा हुँदैपनि उत्तर कोरियाबाट कतिपय तस्विर लिक भएका छन् । लिक भएका तस्विरमाथि उत्तर कोरियाले भने प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
यो मुर्तीको तस्विर खिच्न सक्त मनाही छ
उत्तर कोरियामा सार्वजनिक यातायात चल्दैन, मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा अनुमति लिएर मात्र जान्छन्
शहरको बाहिरी इलाकामा एक ब्यक्तिले खोलामा नुहाइरहेको दृष्य खिचेर सार्वजनिक गरेका फोटोग्राफरलाई श्रम शिविरमा हालिएको थियो
वाल श्रम र गरिवी झल्किने यो तस्विर उत्तर कोरियामा प्रतिबन्धित छ
कुपोषणको शिकार भएका उत्तर कोरियालीका तस्विर लिक भएपछि फोटो ग्राफरहरुलाई त्यहाँ जान प्रतिबन्ध गरिएको थियो
सेनाका जवानले आराम गरेको यो तस्विरमाथि उत्तर कोरियाले प्रतिबन्ध लगाएको छ
सेनाले गाडी धकेल्दै गरेको यो दृष्य खिच्ने पत्रकार पनि कारवाहीमा परेका थिए
उत्तर कोरियामा केही सीमित धनीहरुले मात्र सपिङ मलमा सपिङ गर्न सक्छन् र पाउँछन्
सेनाको माझमा एक महिला रहेको यो तस्विर पनि उत्तर कोरियामा प्रतिबन्धित छ
प्योङयाङको सव वे सिष्टमको तस्विर पनि प्रतिबन्धित छ किन भने त्यहाँ सुरुङ मार्ग पनि देखिन्छ
उत्तर कोरियाली नेताको मुर्तिको मुनीपट्टि कुचो राखिएको एक तस्विर तत्काल प्रतिबन्ध गरिएको थियो ।
खासगरी उत्तर कोरियाको गरिवी झल्किने तस्विर लिनेलाई मृत्युदण्ड दिने गरिन्छ । केही वर्ष अघि एक फोटोग्राफरले उत्तर कोरियाका कुपोषणको शिकार भएका वालवालिकाको तस्विर खिचेपछि देशको अपमान गरेको भन्दै मृत्युदण्डको सजाय पाएका थिए ।
उत्तर कोरियामा घरबारविहिनको तस्विर खिच्न सक्त मनाही छ
उत्तर कोरियामा गरिवी लुकाउनु पर्छ तर त्यहाँ आडम्बर देखाउनेहरु पनि सजायको भागीदार हुन्छन् ।
बालबालिकाले खेतमा काम गरिरहेको यो तस्विर माथि कोरिया सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ
‘पाकिस्तानले रेन्जर विस्थापित गर्दै सीमामा सेना तैनाथ गर्यो’
808 Views २० कात्तिक, एजेन्सी।
भारत पाकिस्तान तनाव बढ्दै गएको अर्को संकेत देखिएको खबर छ। १९० किलोमिटरको जम्मु सीमामा पाकिस्तानले तीव्र रुपमा सेना तैनाथ गरेको छ। सीमा स्थित पोस्ट तथा क्याम्प पाकिस्तानी रेन्जरले सम्हाल्दै आएका थिए।
सीमा सुरक्षामा पाकिस्तानले गरेको यो बदलाव भारतीय सीमा सुरक्षा बल(बीएसएफ)ले नोट गरेको बताइएको छ।
बीएसएफका उच्च अधिकारी र सरकारी अधिकारीहरुले पाकिस्तानी सेनाले नियमित पाकिस्तानी रेन्जरलाई विस्थापित गर्दै आफ्ना जवान र हातहतियार रेन्जर पोस्टमा तैनाथ गरेको पुष्टी गरेको खबर भारतीय मिडियाले लेखेका हुन।
पाकिस्तानी सेनाले रेन्जर पोस्टको कमान्ड लिएको बारे एकिन भन्न नसकिने भएपनि त्यहाँ चहलपहल निकै बढेको र ८-९ दिन देखि नियमित सेनाको गाडीले जवान र हातहतियार ओसारेको एक भारतीय उच्च अधिकारीले बताएका छन्।
पाकिस्तानी सेनाको योजनाबारे कुनै एकिन सूचना नथापाइए पनि सीमामा आफ्नो सैन्य स्थित बलियो बनाउन पाकिस्तान लागिपरेको बताइएको छ।
नोभेम्बरको अन्तिम साता पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहिल शरिफ अवकास लिदैँछन्। आफुले निम्त्याएको तनावबीच आफ्ना उत्तराधिकारीलाई सीमा सुरक्षाको लागि सहज वातावरण तयार गर्न शरिफले अन्तिम तयारी गरेको भारतीय अधिकारी बताउँछन्।
बीएफसीले पाकिस्तानले तैनाथ गरेको सेनाको तह र संङ्ख्याको जानकारी संकलन गर्दै सीमामा भारतीय नागरिक माथी गरिएको आक्रमणसंग उनीहरुको सहभागिता पत्ता लगाउने प्रयास गर्दै गरेको बताइन्छ।
अघिल्लो हप्ता सो क्षेत्रमा ८ नागरिक मारिएका थिए। लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हाशिम भाटीको कमान्डमा रहेका २४ रेन्जरको टोलीको घटनामा संलग्नता रहेको भारतीय पक्षको बुझाइ छ।
अमेरिकामा अलकायदाले आक्रमण गर्न सक्ने खरता, सुरक्षा व्यवस्था कडा
290 Views काठमाडौं, कात्तिक २० । अमेरिकी निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आतंकवादी आक्रमण हुन सक्ने खतरा औल्याइएको छ ।
आतंकवादी संगठन अलकायदाले निर्वाचन पूर्व आक्रमण गर्नसक्ने सूचना प्राप्त भएको र त्यसको आधिकारिकताबारे छानबिन भइरहेको अमेरिकी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
न्यूयोर्क, टेक्सास र भर्जिनियामा सम्भावित आक्रमण हुनसक्ने बताइए पनि प्रहरीले भने निश्चित सूचना नरहेको टिप्पणी गरेको छ ।
निर्वाचनका मूख्य गतिविधि हुने दिनहरुमा हुनसक्ने सम्भावित घटनाबारे लगातार सूक्ष्म अध्ययनमा रहेको अधिकारीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
मूख्य शहरका विमानस्थल, सुरुङमार्ग र पुलहरुमा कडा सुरक्षा निगरानी गरिइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
अमेरिकी मतदाताहरु आगामी मंगलबार नोभेम्बर ८ का दिन हिलारी क्लिन्टन र डोनाल्ड ट्रम्प मध्ये कसलाई मुलुकको आगामी राष्ट्रपति बनाउने भन्नेमा मत दिँदैछन् ।
दुबै उम्मेदवार निर्वाचन सकिने दिन भने न्यूयोर्कमै रहने छन् । दुबैले निर्वाचन अगाडीको अन्तिम प्रचार प्रसार तीब्र बनाइरहेका छन् भने प्रचार अभियान निकै आक्रामक र टिकाटिप्पणीयुक्त पनि भइरहेको छ ।
पछिल्ला मत सर्वेक्षणहरुमा दुबै उम्मेदवारबीच कडा प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । सुरु सुरुमा ट्रम्पलाई निकै पछाडी छाड्दै अगाडी रहेकी क्लिन्टनको अवस्था इमेलकाण्डमा एफबीआईले फेरि जाँच थालेपछि खस्कँदै गएको छ ।
अहिले दुबै नेता पैतालीस पैतालीस प्रतिशतमा आएर अडिएको सर्वेक्षणहरुले जनाएको छ । त्यसैले दुई नेता मध्ये निर्वाचनमा कसले बाजी मार्लान् भन्ने कुनै निश्चित देखिएको छैन । (एजेन्सी)
यी तस्विरको संकेत, तेश्रो विश्व युद्ध छिट्टै शुरु हुन्छ (फिचर)
1,103 Views एजेन्सी ।
पछिल्लो समयमा तेश्रो विश्व युद्ध शुरु हुने चर्चा अन्तराष्ट्रिय मिडियामा बढि नै भैरहेको छ । खासगरी अमेरिका र रुसबीचको परमाणु हतियार सम्बन्धि सम्झौता तोडिएपछि अव यी परमाणु हतियारका मुख्य केन्द्र मानिएका दुई महाशक्तिबीच भयानक युद्ध हुने हो कि भन्ने चिन्ता ब्याप्त छ ।
रुसले आफ्नो देशमा युद्धको तयारी चलिरहेको संकेत दिएपछि यस्ता चर्चाले थप बल पाएका छन् ।
रुसले सोभियत रुसको पालामा रहेका परमाणु हतियारका अखडाहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याएका तस्विर सार्वजनिक भएपछि अव विश्वमा तेश्रो विश्वयुद्धको खतरा मडराउन थालेको विश्लेषण शुरु भएको हो । यी हतियारका अखडाहरुमा रुसले नयाँ र अत्याधुनिक मिसाइल तैनाथ गरिरहेको समेत मिडियाको दावी छ ।
पश्चिमा मिडियाहरुका अनुसार रुसले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको मिसाइल अहिले संसारमा रहेका मिसाइल मध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको छ । रुसले यो हतियारको नाम RS 28-SARMAT राखेको छ भने यो मिसाइललाई नेटोले SATAN-2 नाम दिएको छ ।
७ किलोमिटर प्रतिसेकेण्डको तिव्र गतिमा युद्ध लड्न सक्ने यो मिसाइलको क्षमता ११ हजार किलोमिटर सम्म मार हान्न सक्ने रहेको बताइएको छ । यो एक पटक प्रयोग भएमा बेलायत र फ्रान्स जस्ता देश समेत एकै पटकमा खरानी हुन सक्ने र आधा अमेरिकाको नाम निशान मेटिन सक्ने अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
रुसमा १५ गोप्य शहर
सोभियतरुस टुक्रिएपछि अहिले पनि रुसमा १५ शहर रहस्यमय छन् । रुसमा रहेका गोप्य शहरमा आणविक बम लुकाएर राखेको विश्वास गरिन्छ ।
सोभियत युनियन अस्तित्वमा रहेको समयमा अमेरिका र सोभियत रुसबीच भयंकर शितयुद्ध चलेको थियो । दोश्र विश्वयुद्ध पछि दुई महाशक्तिहरु हतियारको होडमा लागे ।
सोभियतकालीन कतिपय रुसी सैनिक र हतियार भण्डार अखडा अहिले पनि कायमै छन् । रुसको गुडिम हतियार केन्द्र सबै भन्दा विशेष हतियार केन्द्र थियो । किन भने यो हतियार केन्द्र मुख्यतः अमेरिकालाई पुरै ध्वस्त पार्न सक्ने हतियार राखिएको थियो ।
सोभियत रुसको कट्टर दुश्मन अमेरिकाको सीमाबाट नजिक पर्ने स्थानमा राखिएको यो हतियार केन्द्र रुसको गोप्य मिसाइल अखडा थियो भन्दा पनि हुन्छ । यहाँ रुससँग रहेका सबैभन्दा अत्याधुनिक आणविक हतियार राख्ने गरिन्थ्यो । सोभियत रुससँग यति धेरै मिसाइल थिए कि एक झट्कामा न्यूयोर्क, वाशिङ्टन, क्यालिफोर्निया, साउथ डेकोटा र अलास्का ध्वस्त हुन सक्थ्यो । त्यसपछि भने अव यो हतियार केन्द्र विरानो बनेको थियो ।
सन् २०६१ मा पहिलो पटक यो अखडा सैनिक अपरेशनका लागि प्रयोग गरिएको थियो । आधिकारिकरुपमा यसलाई Anadyr-1 भन्ने गरिन्थ्यो । तर पछि त्यहाँको नेतृत्व गरेका कर्नेल गुडिमोवको सम्मानमा स्थानीयले यसको नाम गुडिम राखे । यो सैनिक अखडा निर्माण गरेपछि कर्नेल गुडिमोवले रहस्यमयरुपमा आत्महत्या गरेका थिए ।
सन् २००२ सम्म यहाँको सैनिक युनिटलाई भंग गरिएको थियो । सैनिक युनिट भंग गरिएपछि यहाँ रहेका ५ हजार मानिसले शहर छोडेर सारातोव र एंजेल्समा गएर बसेका थिए । अहिले आएर रुसले यी शहरहरुलाई ब्युँउताउने प्रयास गरेको छ ।
रुसको रामेन्की नामक शहरमा ५०० एकड जमिनमा बनाइएको बंकर सन् १९५० मा निर्माण भएको थियो । यो अण्डर ग्राउण्ड बंकर जमिनबाट २० फिट तल रहेको बताइन्छ ।
रुसले जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न मिल्ने गरि १६४३ वटा आणविक हतियार सम्पन्न मिसाइल तयारी अवस्थमा राखेको छ।
मोसुल सहर इराकी सेनाको घेराबन्दीमा, आइएसविरुद्ध निर्णायक युद्ध
270 Views बग्दाद, कात्तिक १७ । इस्लामिक स्टेट (आइएस)को कब्जामा रहेको इराकको मोसुल शहरलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयासस्वरुप घेराबन्दी गरेको छ ।
इराकी सेना मोसुलको बाहिरी क्षेत्रसम्म पुगेको छ । मोसुललाई नियन्त्रणमा लिन सरकारी सेनाले आक्रामक कारबाही गरिरहेको छ । सरकारी सेना र आइएसका लडाकुबीच भिषण भिडन्त भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
इराकी सेनाको आतंकवाद विरोधी दस्ताले दक्षिणपूर्वी क्षेत्रबाट पनि आक्रमण शुरु गरेको छ । मोसुलमा रहेका आइएसका लडाकुमाथि सेनाले चारैतिरबाट आक्रमण थालेपछि बाहिरी क्षेत्र भने पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छ । यसलाई सेनाले ठूलो उपलब्धि मानेको छ ।
यसैबीच इराकी प्रधानमन्त्री हैदर अल आब्दीले मोसुलमा तीन हजार ५ सय चरमपन्थी रहेको बताएका छन् । उनले चरमपन्थीहरुलाई आत्मसमर्पण गर्न या मर्नका लागि तयार रहन चेतावनी दिएका छन् । (एजेन्सी)
पटाका पसलमा आगलागी, ८ जनाको मृत्यु, पाँच जना घाइतेको अवस्था गम्भिर
395 Views १३ कात्तिक, एजेन्सी।
भारतको गुजरातको एक पटाका पसलमा आगलागी हुँदा ८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
वडोदरा शहरको नजिक रहेको पटाका पसलमा आगलागी हुँदा अन्य पाँच जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये चारको अवस्था गम्भिर रहेको बताइएको छ । घाइतेको स्थानीय वडोदराको सयाजी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
मृत्युहुनेहरुको शरिरको धेरै भाग जलेकाले पहिचान खुल्न सकेको छैन । प्रहरीले अवैध रुपमा पटाका बेच्दै आएको पसलमा आगलागी भएको जनाएको छ ।
शुक्रबार बेलुका लागेको आगो झण्डै पाँच घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको थियो । आगलागीको कारण खुल्न सकेको छैन ।
एन्टार्टिकाको रस क्षेत्रमा विशाल समुद्री जीव आरक्ष बनाउने सहमती
185 Views अन्ततः वर्षौं लामो अन्तर्राष्ट्रिय वार्तापश्चात २४ देश तथा यूरोपेली युनियनका प्रतिनिधिबीच एन्टार्टिकाको रस समुद्री क्षेत्रमा विश्वकै सबभन्दा विशाल सामुद्रिक जीव आरक्ष बनाउने सहमति भएको छ।
उक्त इलाकाको क्षेत्रफल साढे पन्ध्र लाख वर्ग किलोमिटर बराबर छ र अब त्यहाँ ३५ वर्षका निम्ति जथाभावी माछा मार्न पाइने छैन।
उक्त स्थानको सुरक्षा प्रशासनको जिम्मा अमेरिका र न्यूजील्याण्डलाई दिइएको छ।
यसअघि यस विषयमा रुसले सहमति जनाएको थिएन। तर न्यूजील्याण्डका विदेशमन्त्री मुर्रे मक्कल्लीले २४ सहभागी राष्ट्रहरुमाझ दिगो ढंगले माछा मार्ने तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने विषय र सामुद्रिक जीव संरक्षणलाई सन्तुलन मिलाउने गरी अब सहमति भएको बताए।
यस निर्णयको स्वागत गर्दै वातावरणवादीहरुले उक्त सहमतिले पृथ्वीको सबैभन्दा सुन्दर सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण हुने बताएका छन्।
उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा थप यस्ता आरक्ष पनि अब बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
अष्ट्रेलियाको होबार्टमा भएको सहमतिमा एकमतले रस समुद्रलाई मराइन प्रोटेक्टेड एरिया घोषणा गरिएको छ।
रस समुद्रले दक्षिणी महासागरको केवल दुई प्रतिशतमात्र ओगट्छ तर त्यहाँ विश्वभरका एडिली प्रजातिका पेन्गुइन मध्ये ३८ प्रतिशतको वासस्थान छ।
सो आरक्षको प्रस्ताव भने न्यूजिल्याण्ड तथा अमेरिकाले गरेका थिए।
यस सहमति अन्तर्गत अब सो ठाउँबाट कुनै पनि सामुद्रिक जीव तथा खनिज लैजाने पाइने छैन।
तर अनुसन्धानका निम्ति भने केही विशेष स्थलबाट विशेष खालका माछा लग्न पाइनेछ। -बीबीसी
इरानले बनायो आत्मघाती चालक विहीन विमान
297 Views १० कात्तिक, तेहरान (इरान) ।
इरानको विशिष्ट विभोलुसनरी गार्डले बुधबार आफूले ‘आत्मघाती चालक बिहीन विमान’ को निर्माण गरेको बताएको छ ।
उक्त विमानले जमिनबाट जमिन र पानीमा पनि आक्रमण गर्नसकिने इरानले जनाएको छ । यो विमानले युद्धका बेला विस्फोटक पदार्थ बोक्ने बमकै रुपमा प्रयोग हुने गार्डसँग नजिक मानिने तसिम न्यूज एजेन्सीले जनाएको छ ।
पानीको सतहमाथि द्रुत गतिमा उड्न सक्ने यस ड्रोनले आफ्नो निशानामा पुगेपछि विस्फोट हुने क्षमता राख्ने बताइएको छ ।
विमानले भारी मात्रामा विस्फोटक पदार्थ राखी उड्नसक्ने क्षमता राख्छ र पानीको सतहदेखि दुई फिट माथिबाट २५० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले उड्न सक्छ ।
अत्याधुनिक क्यामरा जडान गरिएको यस ड्रोनलाई रातिमा वा दिनमा कुनै समयमा पनि प्रयोग गर्न सकिने तसिमले जनाएको छ।
रुससँग खतरनाक क्षेप्यास्त्र, अमेरिकासहितका शक्ति राष्ट्र आतंकित !
227 Views मस्को, कात्तिक १० । विश्वमा परमाणु हतियारको बर्चश्वका कारण कुनै पनि बेला विश्वयुद्ध हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैंन । त्यस्तो युद्ध कति खतरनाक होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । किनकि शक्ति राष्ट्रहरुसँग एक से एक खतरनाक हतियार छन् । जसले गर्दा भयावह क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यस्तै एक खतरनाक क्षेप्यास्त्र रुससँग छ, जसबाट अमेरिकासहितका शक्ति राष्ट्रहरु पनि थर्कमान हुने गरेका छन् । ‘सेटेन–२’ नाम दिइएको यो हतियारको तस्वीर हालै प्रकाशमा आएको हो ।
सात किलोमिटर प्रतिसेकेन्डको रफ्तारमा हुइँकिने यो क्षेप्यास्त्रले १० हजार किलोमिटरको दुरीसम्म मार हान्न सक्छ । अर्थात् यो क्षेप्यास्त्रले अमेरिकालाई सजिलै निशाना बनाउन सक्छ ।
यो क्षेप्यास्त्रले फ्रान्सको भूगोल बराबरको क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउन सक्छ । यो क्षेप्यास्त्रले अमेरिकी एनटी मिसाइल प्रणालीलाई पनि छक्याउन सक्छ ।
रोचक पक्ष त यो छ कि, रुसको यो क्षेप्यास्त्रको नाम रुस आफैंले राखेको होइन । यो क्षेप्यास्त्रको नामाकरण उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)ले गरेको हो ।
यसले ४० मेगाटन हतियार बोक्न सक्छ । यो क्षमता सन् १९४५ मा अमेरिकाले हिरोसिमामा खसालेको परमाणु बमको तुलनामा दुई हजार गुणा बढी शक्तिशाली विनासका लागि काफी हुन्छ । (एजेन्सी)
७५ हवाईजहाज , १०० पानीजहाज र १००० बढी मानिस निलेको बर्मुडा त्रिकोणको रहस्य खुल्यो (भिडियो)
2,132 Views वैज्ञानिकहरुले बर्मुडा ट्राएङ्गलको रहस्य पत्ता लगाएको दावी गरेका छन् । वैज्ञानिकहरुले यस्तो हेक्सागोनल बादलका कारण हुने गरेको बताएका हुन् ।
बर्मुडा ट्राएङ्गल आन्ध्र महासागरमा ५ लाख स्क्वायर किलोमिटरको एक भाग हो। यसको आकार ट्राएङ्गल जस्तै रहेको छ ।
पछिल्ला एक सय वर्षमा यसमा ७५ वटा ठूला जहाज र एक सय भन्दा साना ठूला पानीजहाज पसेर बिलाइसकेका छन् । यसक्रममा एक हजार भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गइसकेको छ । सञ्चारमाध्यमका अनुसार बर्मुडा ट्राएङ्गलमाथि खोजी गरेका वैज्ञानिकहरुले बर्मुडा ट्राएङ्गलमा धेरै गह्रौं बस्तु तान्न सक्ने क्षमता बादलको हेक्सागोनल आकारका कारण विकास भएको हो ।
कोलोराडो स्टेट यूनिभर्सिटीका मेट्रोलोजिस्ट र्‍यान्डी क्यारभेनीका अनुसार यो बादलले ‘एयर बम’ बनाउने गरेको छ । अर्थात, हावामा बम पड्के जस्तो क्षमता पैदा गर्दछ । समाचार अनुसार र्‍यान्डी क्यारभेनी यस सिद्धान्तको विकास गर्नेहरुको वैज्ञानिकको टीमका सदस्य हुन् । बर्मुडा ट्राएङ्गलमा १७ ( माइल करिब २७३ किलोमिटर) घन्टाको गतिको हावा रहेको हुन्छ ।
यी बादल र हावा आपसमा मिलेर जब जहाज या हवाईजहाजसँग ठोक्किन्छन् तब तिनलाई तानेर समुद्रको पिँधमा पुर्‍याउँछन् । वैज्ञानिकको दावी अनुसार बर्मुडा ट्राएङ्गलमा जम्मा हुने शक्ति समुद्रको पानीसँग ठोक्किने गरेको छ । जसबाट सुनामी भन्दा शक्तिशाली अग्लो समुद्री लहर उठ्ने गर्छ । यी लहर आपसमा ठोक्किँदा अझ धेरै शक्ति पैदा हुन्छ ।
यस क्रममा त्यस आसपास रहेका सबै बस्तु नष्ट हुन पुग्छन् । वैज्ञानिकका अनुसार बादल बर्मुडा द्वीपको दक्षिणी भागमा पैदा हुने गरेको छ । यो बादलले त्यसपछि करिब २० देखि ५५ माइलको यात्रा तय गर्छ ।
बर्मुडा ट्राएङ्गलको रहस्यबारे विश्वमा कयौं तथ्य बाहिर ल्याइएको छ । यस्तै एक सिद्धान्तमा बर्मुडा ट्राएङ्गलको शक्तिको पछाडि एलियनको हात रहेको दावी गरिएको थियो । यसै साल मार्चमा नर्वेका केही वैज्ञानिकले बर्मुडा ट्राएङ्गल रहेको समुद्रबाट मिथेन ग्यास चुहिरहेको दाबी गरेका थिए । जसको कारणले त्यहाँ विशेष किसिमको गुरुत्वाकर्षण बल बन्ने गरेको छ ।
के हो बर्मुडा ट्राएङ्गल
बर्मुडा ट्राएङ्गल रहेको एक खतरनाक इलाका आन्ध्र महासागरमा रहेको छ । यो फ्लोरिडाको मियामी, बर्मुडा द्वीप र प्योर्टो रिकोको स्यान जुआनबीच रहेको छ । यी तीनै स्थानलाई सीधा लाइनबाट आपसमा मिलाउँदा एक ट्राएङ्गल बन्छ। यसै इलाकालाई बर्मुडा ट्राएङ्गल भनिन्छ । यसको जम्मा क्षेत्रफल करिब ५ लाख स्क्‍वायर किलोमिटर रहेको बताइन्छ ।